Prosper & Peace: Greetings
မမီယာတို့လဲ သားသားလေးနဲ့ အတူ
ပျော်ရွှင်တဲ့ ပိတ်ရက်များ ဖြစ်ပါစေ..။
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ. မီယာလဲ စိတ်ချမ်းသာပါစေ.
Merry Christmas မမီယာ
24 December 2011 at 17:53
happy new year မမီယာ။
သားလေး ဘယ် နှနှစ်ရှိပြီလဲ မမီယာ။
မီယာ.. ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ
* all best wishes ever for u *
10 January 2012 at 08:08